आज लगानीकर्ताहरुका लागि विशेष दिन, बजारको यात्रा ३००० कि २६०० ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	आज लगानीकर्ताहरुका लागि विशेष दिन, बजारको यात्रा ३००० कि २६०० ? » Nepal Fusion
आज लगानीकर्ताहरुका लागि विशेष दिन, बजारको यात्रा ३००० कि २६०० ?
काठमाडौ २०७८ पुष २७ गते मङ्गलवार
सोमबार नेप्सेको चार्ट्मा स्पिनिङ्ग टप क्यान्डल बन्यो। यसले बजारमा खरिद चाप र बिक्रि चाप दुबै लगभग समान रुपमा रहेको संकेत गर्दछ। नेप्से १९.४३ अंकले बढ्दा ७ अर्ब १२ करोड भन्दा बढी रकमको कारोबार भएको छ । सुरुवाती चरणमा बढेर २८०६ भन्दा माथि गएको नेप्से दिनभरीमा उतार चढाव हुँदै घट्ने क्रममा २७५४ को बिन्दुसम्म आइपुगेको थियो ।\_
आजको दिन लगानीकर्ताहरुका लागि विशेष रहने छ । नेप्से चार्टलाई १ घण्टाको बेसमा हेर्दा नेप्से २२५५ को बिन्दुबाट बढ्दै गर्दा बनेको कनट्र्याक्टिङ्ग वेज प्याटर्नलाई नेप्सेले ब्रेक गरेको छ। कनट्र्याक्टिङ्ग वेज प्याटर्नले भित्रै क्यान्डल घुमेमा वा कनट्र्याक्टिङ्ग वेज प्याटर्नको तलतिर ब्रेक आउट दिएमा त्यसले बजार घटेर जाने संकेत गर्दछ तर कनट्र्याक्टिङ्ग वेज प्याटर्नलाई माथितिर ब्रेक आउट गरेको खण्डमा बजार एक्स्ट्रिम बुलिश भएर जाने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा बजार घटे पनि २७६० को बिन्दुभन्दा माथि क्लोज दिन सफल भएमा बजारको यात्रा माथितिरकै हुने सम्भावना उच्च भएर जानेछ।
यसरी, बजार २७६० भन्दा माथि नै रहन सफल भयो भने बजारले २८६० हुँदै ३००० सम्मको यात्रा छोटो समयमै तय गर्न सक्ने देखिन्छ भने २७५० भन्दा तल तल जान थालेको अवस्थामा नेप्सेले २६०० को बिन्दुलाई बलियो सपोर्ट बनाउन सक्ने देखिन्छ।
नेप्सेको डेली चार्ट प्याटर्नमा RSI ६६.७७ को लेभलमा पुगेको छ। RSI ६० भन्दा माथि हुनुलाई प्राविधिक रुपमा निकै राम्रो संकेतको रुपमा लिइन्छ। RSI ७० भन्दा माथि बस्न सक्षम भयो भने त्यसले बजारको अझै माथिल्लो लेभलको बुलिश यात्राको संकेत गर्दछ।
२८०० विन्दु माथि उक्लियो नेप्से, कारोबार रकम साढे ७ अर्ब नजिक
नेप्सेले यसकारण गर्यो प्रभु बैंकको शेयर कारोबार रोक्का